BFS oo fadhiyada ugu soo horeeya ka doodi doona sharuucda doorashada – idalenews.com
Muqdisho(INO) – Baarlamaanka cusub ee 10aad oo kalfadhigiisii yeeshay maalintii shalay, ayaa lagu wada in maalmaha soo socda ka doodaan waqtiga la qabanayo doorashada hogaanka sare ee dalka.
Guddoomiyaha KMG ah ee baarlamaanka Cismaan Cilmi Boqorre ayaa sheegay in fadhiyada ugu soo horeeya ee baarlamaanka dib u eegis lagu sameyn doono dhamaanba wixii shuruuc ah ee la xiriir doorashada ee horey loo gaaray, iyadoo la magacaabayo guddiyo loo xil saari doono soo diyaarinta qabka howsha doorashada u socon doonto.
“ Sida ugu dhaqsiyaha badan ayuu u fariisinayaa baarlamaanka, sharuuc ayaa la sameynayaa, gudiyo ayaa jiri doona u xil saaran doorashada iyo sida loo agaasimayo’’ ayuu yiri Cismaan Cilmi Boqorre.
Waxaa uu intaa ku daray in wixii go’aano ee ku aadan doorashada ay u taalo Baarlamaanka, isla markaana wax shaqsi sameeyay howsha lagu wadi doonin, laguna howlgali doono wixii sharuuc ah ee uu dajiyo baarlamaanka.
Ugu danbeyntii, baarlamaanka 10aad ee Soomaaliya oo ka kooban golaha shacabka iyo aqalka sare ayaa talada dalka la wareegay, waxaana looga fadhiyaa in waqti kama dambeys u qabto doorashada Madaxweynaha iyo guddoonka labada aqal, iyadoo doorashada ay salka la geli doono sanadka cusub ee 2017 oo maalmo ay ka dhiman yihiin.